traffic Signal Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု|Engineer|လယ်ကွင်းလုပ်ငန်း / traffic Signal Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
ယာကုပ် ဧပြီလ 13, 2016 ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု|Engineer|လယ်ကွင်းလုပ်ငန်း 1 မှတ်ချက် 942 views
ဧပြီလ 8, 2016
traffic Signal Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြ
The Traffic Signal Technician performs at the Apprentice or Journey level, အရည်အချင်းများနှင့်ရွေးချယ်ထားကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏အတှေ့အကွုံအဆင့်ပေါ် မူတည်.. ယေဘုယျညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်, အဆိုပါခရီးအဆင့်အနေအထားအသွားအလာ signal ကို tool များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အတွက်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်, ယာဉ်အသွားအလာ signal ကိုစနစ်များကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးများနှင့် troubleshoots, လိုအပ်သောအဖြစ်နှင့်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောပါဘူး. အဆိုပါခရီးအဆင့်အနေအထားကို၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်, အဆိုပါအလုပ်သင်အဆင့်ကိုအနေအထားကိုအဆိုပါတာဝန်များကိုသိရှိလာနှင့်အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာ signal ကိုစစ်ဆင်ရေးများအတွက်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်အဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်.
ကြည့်ရှုစစ်ဆေး, ကိုဖယ်ရှား, ထိုကဲ့သို့သောအသွားအလာ signal ကိုနဲ့ controller နှင့်ပုံးအဖြစ်နှင့်ပြုပြင် signal ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ, မော်တော်ယာဉ်နှင့်လူသွားလူဦးခေါင်းအသင်းတော်များ, အလင်းအိမ်နှင့် circuitry.
adjust, ပြုပြင်, အစားထိုးဖို့, သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ပြုပြင်မွမ်းမံ, အီလက်ထရောနစ်နှင့်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ. controller စ, relays များ, switches များ, စနက်, တိုင်မားနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ.
တိုင်ကြားချက်များနှင့် traffic ကို signal ကိုအမှား၏အစီရင်ခံစာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်.
adjusts, ပြုပြင်ရေး, သို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းပစ္စည်းကိရိယာများဖယ်ရှားပေး.
monitor များနှင့်အစီအစဉ်များကိုအသွားအလာ signal ကိုနဲ့ controller နှင့်လိုအပ်သလိုချိန်ညှိစေသည်.
signal လမ်းဆုံ Relamps.
paint အသွားအလာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် signal ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ.
ကြည့်ရှုစစ်ဆေး, ဘက်ထရီနှင့်ဘက်ထရီ backup လုပ်ထားပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် install.
ယာဉ်အသွားအလာ signal ကိုအချိန်ကိုက် parameters တွေကို Adjust နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်.
အမိန့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, စိတျအပိုငျး, နှင့်ပစ္စည်းများ.
ကို set up အသွားအလာထိန်းချုပ်.
ကြည့်ရှုစစ်ဆေး, ဖယ်ရှားရေး, နှင့်ပြုပြင်ရေးထိုကဲ့သို့သောအသွားအလာ signal ကိုနဲ့ controller အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများအချက်ပြ, ပုံး, မော်တော်ယာဉ်နှင့်လူသွားလူဦးခေါင်းအသင်းတော်များ, အလင်းအိမ်နှင့် circuitry.
adjusts, ပြုပြင်ရေး, အစားထိုး, သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ကိုအထူးပြု, အီလက်ထရောနစ်နှင့်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ, controller စ, relays များ, switches များ, စနက်, တိုင်မားနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ.
တိုင်ကြားချက်များနှင့် traffic ကို signal ကိုအမှား၏အစီရင်ခံစာများစုံစမ်းစစ်ဆေး.
မော်နီတာနှင့်အစီအစဉ်များအသွားအလာ signal ကိုနဲ့ controller နှင့်လိုအပ်သလိုချိန်ညှိစေသည်.
သုတ်ဆေးအသွားအလာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် signal ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ.
ကြည့်ရှုစစ်ဆေး, ဘက်ထရီနှင့်ဘက်ထရီ backup လုပ်ထားပစ္စည်းကိရိယာများဖယ်ရှားပေးနှင့်တပ်ဆင်ပြီး.
adjusts and parameters တွေကိုအခြိနျဇယားအသွားအလာ signal ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော.
တိကျမှန်ကန်အလုပ်မှတ်တမ်းများစောင့်ရှောက်; အမိန့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, စိတျအပိုငျး, နှင့်ပစ္စည်းများ.
အဆင့်ဝန်ထမ်း apprentice မှလမ်းညွှန်မှုနှင့်ဦးတည်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေး.
နောက်တစ်ခု သက်သေအထောက်အထား Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ